Ndị dike WTN sitere na mba 128 hụrụ Kenya n'anya: Ahịa njem ụwa na London ga -eme ya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » WTN » Ndị dike WTN sitere na mba 128 hụrụ Kenya n'anya: Ahịa njem ụwa na London ga -eme ya
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ kacha ọhụrụ na Kenya • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa • WTN
Enwere puku kwuru puku ndị dike na njem na njem nlegharị anya n'ụwa niile. Enwere ndị ọkachamara njem nlegharị anya tụfuru ihe niile n'ihi COVID. A na-amakarị ha aha. WTN dike maka ndụ bụ ANONOMYOUS Tourism Hero!
A na-eme atụmatụ nzukọ mmadụ nke mbụ maka World Tourism Network na ihe ngosi azụmaahịa mbu nke mbu kemgbe oria ojoo a, nke Ahia njem mba uwa na London.
Dike mbụ WTN ghọtara bụ onye na-ahụ maka njem nlegharị anya Kenya, Minista Najib Balala.
Nke a bụ ohere izute ọtụtụ ndị dike na Ndị otu WTN in mmadụ mgbe ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 2 nke nzukọ mbugharị a ma ama.
Networklọ Ọrụ Njem Nleta Ụwa na -akpọ ndị sonyere ka ha na -aga n'ahịa njem ụwa dị na London ka ha bịa nnabata nnabata ndị njem anyị wee zute ọtụtụ ndị dike njem nlegharị anya na -abịa ihe ngosi azụmaahịa njem mba ụwa mbụ mbụ a mgbe oria ojoo malitere.
Ndị dike atọ mbụ WTN ghọtara bụ Hon. Najib Balala si Kenya, Hon. Edmund Bartlett si Kenya, na Dr. Taleb Rifai onye bụbu odeakwụkwọ UNWTO si Jọdan. Ha atọ ga -esonye na World Tourism Network na Magical Kenya Stand na London.
Kenya ga-abụ onye ọbịa izizi maka nnọkọ mbụ nke ndị dike na ndị otu WTN n'oge WTM na London.
Kenya Stand AF245 ga -abụ ebe mgbakọ na Mọnde, Nọvemba 1, elekere anọ nke abalị
More ozi ndị ọzọ dị na dike ihe omume website
“Kenya bụ ezigbo enyi nke njem nlegharị anya ụwa. Mgbe ihe karịrị nzukọ mbugharị 200 ọtụtụ ndị otu WTN ghọrọ ezigbo enyi.
Ndị dike anyị nyere anyị mmụọ nsọ ime ya n'ọtụtụ ihe ịma aka. Enweghị m ike ichere izute ụfọdụ ndị dike anyị na ndị otu ibe m na ihu.
WTN bụ mba 128 ugbu a na ihe karịrị ndị otu 1000 siri ike.
Maka World Tourism Network Kenya ga -abụ etiti n'ahịa njem ụwa na London.
Mụ na ndị enyi anyị niile nọ na Kenya, World of Tourism ji mpako nke dike anyị mbụ, bụ Hon. Najib Balala, odeakwụkwọ njem nlegharị anya maka Kenya. Ọ na -enweta ya n'ezie!